Bukaanada u Adkeysta Dawadda oo ku badanayo Soomaaliya! | Laashin iyo Hal-abuur
Bukaanada u Adkeysta Dawadda oo ku badanayo Soomaaliya!
June 2014 – Adkeysi jeermiska sababa cudurka qaaxada ee u yeesha daawada ayaa si aad uga baahayo dalka Soomaaliya sida ay tilmaameyso daraasad ee sameeysay Hey’ada Caafimaadka Aduunka.
Cudurka qaaxada waa cudur uu sababo jeermis loo yaqaanno “Mycobacterium” oo badanaa ku dhaca sanbabada iyo xubno kale ee jirka. Jeermiskaan sababa cuddurka qaaxada ayaa adkeysi u yeesha labada daawo ee ugu awooda badan safka horana kaga jira daaweynta cudurka kuwaas oo kala ah “isoniazid iyo rifampin.”